Raketina An-Tsarintany Ireo Fofona Any Kiev · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2017 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, Italiano, English
Sary: Kate McLean
Any Angletera, miara-misakafo hariva ny mpianakavy sy ny mpinamana, ny andro noely, sokafana ireo fanomezana ary dia tonga ny fifalian'ny fety. Nohararaotin'ilay mpanakanto sady mpamorona, Kate McLean, ny andro fialantsasatra mba handehanany any Kiev, sy hanaovana fizahantany tsotra ny renivohitra mirentin'i Okraina. Tsy fantany akory fa niandry azy i Kiev.
Ny firaketana “an-tsarintany ny fofona” manerantany nandritra ny dimy taona farany no nahafantarana azy, avy any Milan ka hatrany Glasgow sy Rhode Island, nanjary nalaza i McLean. Rehefa nisy fahatarana 24 ora ny sidiny ho any Okraina, dia nanàla ny sorisoriny tamin'ny Twitter izy.
“Misy olana ny sidin'ny Ukrainian International Airlines, ary lasa adala aho ka nibitsika zavatra vitsivitsy momba izany, ary nisy mpanao gazety momba ny angon-drakitra avy any Kiev nandefa hafatra tamiko” hoy i McLean.
Nahasarika ny mason'i Andriy Gazin, monina any Kiev, izay misora-tena ho ” mpanaraka angon-drakitra” sy “procrastiworker” ny bitsiny. Nifandray tamin'i McLean izy, ary nanontany azy raha ho any Okraina izy. “Fitsidihana momba ny asa ve, afaka hanao famelabelaran-kevitra na fanolorana tsy mifidy lohahevitra ho anay ve ianao ?” no fanontanian'i Gazin, araka ny nambaran'i McLean.
“Rehefa naparitak'i Kate tao amin'nyTwitter fa ho any Kiev izy, dia tsapako fa tena fotoana mety izany mba hahafantarana azy sy iresahana aminy fitsangatsanganana famantarana fofona sy firaketana an-tsarintany ny fofona ” hoy ny fanazavan'i Gazin tao amin'ny mailaka. ” Fanapahankevitra tampoka izany, ary nanontaniako ireo mpanaraka ahy ao amin'ny pejy Facebook-ko dataviz [ fijerena ny angon-drakitra]….. nisy am-polony ireo nanaiky handray anjara”.
Araka izany, ny 25 Desambra dia niainga mba hirakitra ireo fofon'ny ririnina tany Kiev ilay vondrona kely “niaraka tamin'ny kahie fitànana an-tsoratra ireo velakevitra isan-karazany sy taratasy kely mivalona, miampy ireo olona maromaro avy amin'ny lafy valo”. Tena namirapiratra ny vokatra.
Ny làlan'ny mpitsangatsangana mpamantatra fofona mamakivaky an'i Kiev. Sary: Kate McLean
Eo amin'ny dingana famoronana ny antsipirihin'ny sarintanin'ny toerana izay anentoentoan'ny fofon'ny ririnina any Kiev i McLean izao.
Nirakitra an-tsoratra ny fofon'ny tanàna, toy ny fofon'ny “nosy fahavaratra”, ” volom-biby mando”, “vy harafesina” ireo “mpitsangatsangana mpamantatra fofona”. Amin'ny maha-olom-baovao azy, voaavak'i Mclean tsara ireo fofona izay tsy hain'ireo mponina efa zatra avahana. ” Tena misongadina mihitsy ny fofon'ireo arina fandrehitra ampiasain'ilay trano fisakafoanana ery ambonin'ny Fiangonana Masindahy Misely (Saint Michel )”, hoy i McLean.
“Nitono na nahandro hena tamin'ny fitonoan-kena ny ankamaroan'ny olona — noho izany niakatra ny fofona mahery — fa hafa mihitsy ny an'ilay fandoro… Fatana barika maloto niaraka tamin'ny saribao no tao”, hoy ny filazany. Manana ny fofona mampiavaka azy i Kiev hoy izy, raha nanamarika ny fahasarotan'ny “famantarana” ireo fofona miparitaka.
“Fofon-kitay be izay miseho amin'ny endrika maro ny iray. Avy amina fofonà saribao izany ary saika fofona lafika. Ny iray kosa dia tena hafa mihitsy, fofona tavin-kena kisoa misy fofon-tsetroka — zavatra izay tsy mbola fantatro teto ambonin'ny tany” hoy izy.
Manana ny fofona mampiavaka azy, izay lazain'i McLean fa sarotra ho an'ny olona ao an-toerana no mamantatra azy , ihany koa ny toerana masina any Kiev. Ny ” labdanum (ditinà ‘ zavamaniry ciste’ ) izay anaovana emboka manitra any am-piangonana izany, laddanik no iantsoana azy eto. Henoko ilay fofona, saingy tsy voafaritra tao anatin'ny fitsangatsangana famantarana fofona – tsy voasoratra raha ny marina… ho ahy, fofona emboka manitra fotsiny ilay izy, labozia masina manentoento avy amin'ny hazon'ny varavarana mba hanairana ahy”, hoy izy.
Fofon'ny zava-maitso amin'ny ririnina io, tahaka ny voaloboka antitra maina eny an-tanim-boaloboka, fanaingoana hazo noely, zavatra mahery fofona eny an-dàlana.. Fofon'ny nosim-pahavaratra amin'ny ririnina no ilazako azy. Sary Kate McLean
Raha toa ka famantarana ny tanàna ny làlana namakivaky an'i Kiev ho an'i McLean, dia fijery vaovao sy mahaliana amin'izay zavatra efa mahazatra kosa no niainan'ireo mponina niaraka taminy tamin'izany. ” Folo taona no niasako tao amina orinasa mpanao fanafody”, hoy i Anastasia Fesseneko. ” Ho ahy, tahaka ny varavarankely vaovao…. mahafinaritra ahy ao aminà firenena iray ny fitsangatsanganana famantarana fofona”, hoy izy. ” Eny rehetra eny ny aingam-panahy – ny ahitra, ny voninkazo, ny rivotra madio, ary ny hazo… Fa ny tena manaitra ahy indrindra dia ny habetsahan'ny fofona manodidina ahy”.
Tsikaritr'i Gazin fa mety ho fomba vaovao hanaovana ny sarintanin'ny tanàn'i Kiev ilay firaketana an-tsarintany ny fofon'ilay tanàna. “Heveriko fa ny zavatra voalohany fantatra nandritra ny fitsangatsanganana famantarana fofona, dia tsy mbola niainanareo tamin'ny alàlan'ny fofona mihitsy ny tanàna. Raha ny marina, ny tiako ho lazaina dia manimbolo karazana fofona ianareo isanandro, kafe, entona, mpanao mofo, hanitra, sns. Nefa tsy ezahanareo ny hampiaraka azy rehetra… ny mitantara toerana manokana na ny tanàna amin'ny ankapobeny”, hoy ny fanazavany, tamin'ny fanamarihana ny fitombon'ny karazana fomba izay hiraketan'ireo mpahay angon-drakitry ny erana, tsy hadino amin'izany ny asan'ny orinasa vaovao toy ny What3words izay mizara ny erana ho vondrona manana lafiny telo metatra, amin'ny “rafitsoratra miafina postaly” amin'ny teny telo.
Lokon'ny sampanà hazo kesika. Sary :Kate McLean
“Ny zavatra izay tsy fantatro, hoy i Gazin dia ny fahazoana mirakitra an-tsary marina amin'ny alàlan'ny fofona maromaro ireo faritra samy hafa ao Kiev “.
Ny fofon'ny Jytniy Rinok no ohatry ny fifangaroam-pofona mahery indrindra. Tahaka ny ” tranom-bakokana fofona isan-karazany : hena sy trondro manta, ronono sy tantely, laro mpanome tsiro sy voankazo, ireo kojakojan-tokatrano ihany koa toy ny temitra, ny akanjo” io tsena io hoy i Gazin.
Taratra hazavana ao aminà trano haolo. Maimbo lao sy vy harafesina. Sary : Kate McLean
Tantarain'i McLean ny fahitan'ilay namana iray : “ny vanin-taona rehetra no hita ao raha ny marina : ao ny ririnina, ny fahavaratra, ny lohataona, ny fararano, manjaka daholo ny rehetra ao amin'io tsena tokana io. Ny fahavaratra amin'ny frezy, ny fararano amin'ny ampongaben-danitra… Nahitana divay mafana (ririnina) eo am-pidirana ao an-tsena, manaraka azy eo ny lohataona dia ireo mpivarotra karazana zava-maitso ery an-joro, izay (a) tena maitso no (b) vaovao be mihitsy — hanitra avy amin'ny ravina entin'ny rivotra. Nahita daholo izany ry zalahy ireo ny farany”.
Fofon'ny tsena taloha : tsy mahafinaritra, tsy azon-drivotra, tahaka ny volom-biby mando, sy ny fofona miavaka sy manitry ny frezy, toy ny nosin'ny hafaliana ! Sary Kate McLean
Mazava ho azy, fa manana ny fiantraikany amin'ny fandraisana sy ny famoahana ireo fofona, “be dia be” ireo vanin-taona amin'ny taona, hoy hatrany i McLean. ” Zavatra efa nolazaintsika tary am-piandohana izany. Mila hafanàna ny fofona mba ahafahany miparitaka. Vokany, rehefa mafana, dia misy ireo môlekiola mamofona eny amin'ny rivotra… mitsahatra tsy miasa ny fanamboloan'ny olona rehefa mangatsiaka ny andro. Vintan-dratsy anankiroa : tsy fisianà fofona sy tsy fahaizana mamantatra azy ireny”.
Mety ho sarobidy ilay sarintany, ary tsy ho an'ireo izay tsy afaka mifoka ny rivotr'i Kiev ihany. Misy vehivavy iray zara raha manimbolo tao amin'ny vondrona nisy an'i McLean, hoy ny fitantaran'i Gazin.” Tonga tamin'io fitsangatsanganana io izy mba hahatsapa fotsiny ny tanàna amin'ny alàlan'ny zavatra izay iainan'ny hafa”.